यसकारण प्याज काट्दा आउँछ आँसु, खुर्सानी खाँदा पसिना - ramechhapkhabar.com
यसकारण प्याज काट्दा आउँछ आँसु, खुर्सानी खाँदा पसिना
प्याज काट्दा जो–कोहीको आँसु आउँछ । प्याज काट्दा आँसु आउनु स्वाभाविक हो । तर किन प्याज काट्दा आँसु आउँछ होला ? यसबारे तपाईंलाई थाहा छ ? प्याजमा एमिनो एसिड र सल्फेनिक एसिड पाइन्छ । प्याज काट्दा यी दुई एसिड मिश्रण भई सल्फर ग्यास बन्छ र यो ग्यास आँखामा पुग्छ । सल्फर एसिड आँखामा पुग्दा पोल्छ र आँखामा आँसु आउँछ ।
प्याज काट्दा आँसु नआउन के गर्ने ?
प्याजलाई काट्नु भन्दा केही समय अगाडि यसलाई फ्रिजमा राख्दा काट्दा आँसु आउँदैन । प्याजलाई काट्नु भन्दा पहिले पानीमा भिजाउँदा पनि आँसु आउँदैन ।प्याजलाई काट्नु भन्दा पहिले त्यसको जरालाई काटेर फाल्दा पनि आँसु आउँदैन । प्याज काट्दा छेउछाउमा पङ्खा नचलाउने, काट्दा चस्मा लगाउँदा पनि आँसु आउँदैन ।
प्याज काट्ने छेउछाउमा मैनबत्ती बाल्दा पनि आँसु आउँदैन ।
सुत्दा सास फेर्न गाह्रो हुँदा यस्तो स्वास्थ्य जोखिम
कतिपय मानिसमा सुत्दा सास फेर्न गाह्रो अनुभव हुन्छ । यस्तो हुनेमा डिप्रेसनको जोखिम बढ्न सक्ने अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (अमअ)को अध्ययनले देखाएको छ ।
’स्लिप’ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन अनुसार, निदाएको बेला सास फेर्ने समस्या पुरुषको दाँजोमा महिलामा बढी हुन्छ । निदाएको बेला सास अड्कनु, हलुको सास फेर्नु वा घुर्नु जस्ता लक्षणहरू भविष्य प्रति आशावादी नहुने, विफलता डर डिप्रेसनसँग सम्बन्धित हुन्छ ।
अध्ययनमा सहभागी भएका ९ हजार ७ सय १४ प्रौढ महिला तथा पुरुषमा गरिएको अनुसन्धानमा ’स्लिप एपेनिया’ भनिने निद्राको बेला सास रोकिने समस्याबाट पुरुषको दाँजोमा महिलाहरूलाई डिप्रेसन ग्रस्त हुने जोखिम बढी हुने देखाएको छ ।
अनुसन्धान अनुसार, मानसिक स्वास्थ्यका चिकित्सकले बिरामीलाई प्रायः समान प्रश्न गरेका थिए । निद्रा कसरी लाग्छ ? उठेपछि शरीर चङ्गा हुन्छ हुँदैन ? लगायतको प्रश्नमा निद्राको बेला सास फेर्ने समस्याको प्रभाव रोगीको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर देखिएको छ । सधैँ एकै समय उठ्ने, राति राम्ररी सुत्न नपाएका, बिहान ढिलोसम्म सुत्न अलार्म घडीको स्नुज बटन थिच्नुपर्ने स्थितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई झन् समस्यामा पार्न सक्छ ।
लाफ वोर्फ विश्वविद्यालयमा दुई वर्षसम्म गरिएको उक्त अनुसन्धानमा शरीरको प्राकृतिक घडीको नैसर्गिक लयलाई बिगार्ने र समस्या बढाउने देखिएको छ । १ हजारभन्दा बढी व्यक्तिमा गरिएको अनुसन्धान अनुसार, अलिकति पनि सुत्न नसक्ने, अनिद्राका रोगीहरूले बिहानभरि निद्रा कुर्नुको साटो एउटै समयमा उठ्नु राम्रो हुन्छ ।
थप केही घण्टा सुत्नका लागि ओल्टेकोल्टे फेरिरहनुको सट्टा दिनहुँ एउटै समयमा उठ्ने गर्नुपर्छ । अध्ययन अनुसार, अनिद्राले ग्रस्त व्यक्तिहरू आफ्ना सामान्य सहकर्मीहरूको तुलनामा काम गर्न १० प्रतिशत कम सक्षम हुन्छन् ।